प्रयोग गरेर लाभ लिनुस : कागती एक फाइदा अनेक -
स्वस्थ जीवन | Sunday, 6th September 2015, 06:39 PM |
१८ भदौ । तपाई हाम्रो भान्सामा प्राय कागती छुट्दैन । कागतीलाई हामीले अचारमा अथवा सर्वद पानीमा खानका लागि प्रयोग गर्ने गर्छौ । अझ कागती नुन खुर्सानीसँग चोपेर खान अथवा साधेर खान पनि खुब मन पराउँछन् । तर, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ कागतीका गुण र यसका फाइदाहरु । कागती भिटामिन सी को खानी हो । कागतीको हामिले प्रयोग गरिरहेका हुन्छौ, तर अझ बढि बहुआयामिक फाइदा पूराउने तरिकारले कसरी कागतीलाई सेवन गर्ने भन्ने पनि जानकारी नहुन सक्छ ।
कागती निकै हितकारी फल हो । यो अमिलो भएपनि खानमा निकै मिठो हुनेमात्र होइन गुनिलो पनि हुन्छ । कागतीमा औषधीय गुण पाइन्छ र यसको नियमित सेवनले विभिन्न खालका रोगबाट हामीलाई सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ । यो क्षारप्रधान र पित्तशामक गुणको हुन्छ । कागतीमा रक्त शोधक, मुत्रकारक, पसिना निस्कासक, ज्वर निवारक, रेचक आदि गुण पनि रहेको हुन्छ । कागतीमा भिटामीन ‘सी’ प्रशस्त हुन्छ । यसको प्रयोगबाट रक्तनली सफा हुन्छ । यो पाचक गुणले पनि पूर्ण छ । कागतीको रस सर्दी एवम् गर्मी दुवै प्रकृतिको हुन्छ । गर्मीमा चिसो पानीका साथमा यसको रस प्रयोग गरेमा शीतलता प्राप्त हुन्छ भने तातो पानीसंगै पिएमा यसको शीत्तल गुण उष्णतामा परिणत हुन्छ । यसको बोक्रा र बियाँ भने उष्ण प्रकृतिको हुन्छ । कागतीका ९ फाइदा पढ्नुहोस् :
पाचन प्रक्रियामा सुधार : कागती पानीको सेवन गर्नु पाचन क्रियालाई सन्तुलित पार्नमा सहयोगी हुन्छ । कागतीपानीको सेवनले कलेजोलाई पित्तअम्ल उत्पादन गर्न लगाउँछ, जुन पाचनका लागि आवश्यक हुन्छ । साथै यसले पाचन प्रणालीमार्फत विषाक्त पदार्थको उत्सर्जनमा पनि सहयोग गर्छ ।
लामखुट्टे भगाउने : तपाइँलाई थाहा छ ? कागतीलाई लामखुट्टे प्रतिरोधी चिजको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो निकै सजिलो छ । आधा काटेको कागती यसका लागि पर्याप्त छ । आधा काटेको कागतीमा केही ल्वाङ हालेर त्यसलाई कोठामा राख्नुहोस् । लामखुट्टे तपाइको कोठाबाट दुर रहन्छ ।
स्याउलाई फ्रेस राख्न : स्याउ काट्ने बित्तिकै काटेको ठाउँ खैरो बन्दछ । तपाइलाई त्यो स्याउ हेर्दा पनि खान मन नलाग्ने हुन सक्छ । त्यसैले स्याउ काट्दा चक्कुमा कागतीको रस दल्नुहोस् वा स्याउलाई नै कागतीको रसमा चोप्नुहोस् । यसो गर्दा स्याउ काटिसकेपछि पनि फ्रेस रहन्छ ।
डण्डीफोर र अनुहारको पोतो हटाउन : कागतीको टुक्रालाई दिनहुँ डण्डीफोरमा सुत्नु अघि रगड्ने, रातभरि त्यसै राख्ने एवम् बिहान उठेर धुने गर्दा यसमा सुधार हुन्छ । गहुँको पिठो वा बेसन वा मुल्तानी माटोमा कागतीको रस मिसाई दिनहुँ अनुहारमा लेपन गरी आधादेखि एक घण्टा बस्ने र पखाल्ने गर्दा डण्डीफोर र अनुहारको पोतोमा पनि लाभ गर्दछ । कागती र मह बराबर मिश्रित गरी अनुहारमा लेपन गर्ने र २०/३० मिनेटपछि कपासले रगडेर अनुहारमा मालिश गर्दा अनु्हारको चाँयामा सुधार हुन्छ । कपालमा चाँया पर्ने कागतीको रस एवम् पानी मिसाई रौंको जरासम्म पुग्ने गरी रगड्ने र केही बेरपछि पखाल्ने । हप्तामा २/३ पटक यसो गर्दा कपालको चाँया हट्दछ ।
उच्च रक्तचाप र हृदय रोगीलाई उपयोगी : उच्च रक्तचाप र हृदय रोग भएका बिरामीले दिनहुँ पानीमा मिसाई वा दालमा मिसाई आधादेखि एउटासम्म कागती खाने गर्दा रक्तचापमा फाइदा गर्दछ साथै हृदय रोगमा पनि लाभ गर्दछ ।
कब्जियत समस्या दुर गर्न : तपाईलाई कब्जियत छ ? चिन्ता नगर्नुस । कब्जियत दिसा कडा हुने र सफा नहुने समस्या छ भने दिनको एउटा कागतीलाई ४/५ लिटर पानीमा मिसाई पटक–पटक गरेर पिउने गर्दा कब्जियत हट्न सहयोग गर्दछ ।
छाला चिलाउने समस्या हटाउन : तपाईलाई छाला चिलाउने रोग छ भने पनि तपाइले कागतीको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । छाला चिलाउने समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ भने कागतीको टुक्राले रगड्दै १/२ दिनको फरक पारी नुहाउने, सफा गर्ने गर्नु होस् फाइदा हुन्छ ।
रक्सीको नसा हटाउन : रक्सीको नशा हटाउन कसैलाई रक्सी खाएर बढी नशा लागेको छ भने कागतीको टुक्रा चुसाउने वा कागती पानीको सर्बत खुवाउने गर्दा रक्सीको मात हराउँछ ।
क्यान्सर पीडितका लागि सहयोगी : क्यान्सरवाट बच्न नियमित रूपमा दैनिक भोजनमा केही मात्रामा कागतीको प्रयोग गरी खाँदा क्यान्सरको समस्या कम हुन्छ ।